57% ny olona tsy manolotra anao satria ... | Martech Zone
57% ny olona no tsy mamporisika ny orinasanao satria manana ianao tranokala finday tsy voatsara loatra. Maharary izany… ary fantatsika Martech Zone anisan'ireny! Na dia manana fampiharana finday mahafinaritra aza izahay, dia fantatray ilay Jetpack mahazatra findaye dia fanaintainana ny mijery ny tranokalanay.
Rehefa manohy miara-miasa amin'ireo mpanjifanay izahay ary mijery ny azy ireo Analytics, lasa mazava be amintsika fa ny mpanjifanay izay tsy voatsara amin'ny finday dia tena tsy ampy amin'ny isa sy kalitaon'ny fitsidihana hitan'izy ireo avy amin'ireo mpampiasa finday. Ny sasany, toa an'ity tranonkala ity, dia manana lohahevitra manokana momba ny finday ary tsy mahita vokatra tsara akory isika tahaka ireo mpanjifanay manana tranokala mandray andraikitra. Nahatonga antsika mpino… hany ka miara-miasa amin'ireo lehibe izahay ekipa famolavolana sy fampandrosoana ao amin'ny Exit 31 amin'ny fananganana lohahevitra vaovao tanteraka izay mamaly.
Betsaka aminareo angamba no mamaky an'ity amin'ny smartphone na tablette fa tsy amin'ny laptop na desktop (farafaharatsiny araka ny statistika). Na eo aza ny fiakaran'ny finday haingana be - toa tsy alina - tsy sarotra ny mahatakatra izany. Miaina ao anatin'ny tontolo iray ilantsika ny Internet eo am-pelatanantsika isika, ary ny finday avo lenta sy ny takelaka dia mahavita manome traikefa nomerika tsy miovaova (sy mahomby kokoa) noho ny solosaina finday sy birao sarotra.
Ity infographic avy amin'ny WSI ity dia misy ny statistika rehetra ilainao hanamarinana ny tetezamita amin'ny traikefa mpampiasa voavolavola finday:
Mpampiasa Internet irery ihanys - Ny 23% -n'ny Etazonia dia finday ihany. Midika izany fa tsy mampiasa birao akory izy ireo hitadiavana sy hahita vaovao amin'ny Internet.
Fikarohana finday - Fikarohana 1 amin'ny 4 no entina amin'ny finday.
Fampiasana finday - 98% ny olona mampiasa finday avy any an-trano, 89% mandeha, 79% raha miantsena, 74% any am-piasana ary 64% amin'ny fitateram-bahoaka.
Tsy mahagaga raha amin'ny 2015, ny teti-bidin'ny vinavina ny marketing amin'ny finday dia hahatratra 400 tapitrisa dolara any Etazonia ihany!
Tags: Androidfivoahana 31iPhonefanatsarana findaykaroka findaytranokala findayfampiasana finday ihanytranonkala mamalyfikarohana Optimizationfinday avo lentatakelakaoviana no ampiasaina ny findaywindows mobilewsi